Ciyaaraha ba'an: maxay yihiin, astaamo iyo tusaalooyin | Ragga Stylish
isboorti xad dhaaf ah
Waxaa jira dad jecel inay dareemaan adrenalin iyo kuwa had iyo jeer dareema khatar dhab ah. Sidaa darteed, waxaa jira isboorti xad dhaaf ah. Waa nooc isboorti oo soo bandhigaya khatar dhab ah ama muuqata oo ku wajahan sharafta jir ahaaneed ee kuwa ku dhaqma. Qaar ka mid ahi waa kuwo nafta halis gelinaya. Waxay noqon karaan labadaba isboorti oo lagu fuliyo xaalado adag ama daran ama waxqabadyo qaarkood oo aan halistooda gebi ahaanba aan la xakamayn karin xaqiiqda haysashada farsamo wanaagsan ama muuqaal jireed.
Qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa wax walboo aad ubaahantahay inaad ka ogaato cayaaraha xad dhaafka ah iyo astaamahooda.
1 Waa maxay isboorti xad dhaaf ah
2 Soojiidashada cayaaraha xad dhaafka ah
3 Maxaad u jeceshahay ciyaarahan
Waa maxay isboorti xad dhaaf ah
Waa nooc isboorti oo lagu sameyn karo xaalado aad u daran ama in diyaar garow jidheed ama farsamo oo wanaagsan uusan kuu diyaarin ama kaa hor istaagin halista. Mid ka mid ah cunsuriyada qeexi kara isboorti xad dhaaf ah Waa raadinta cirbadaha adrenaline ee ciyaartooyga.
Isboortigaani waxay lamid yihiin hal-abuurnimo, xamaasad iyo tijaabin. Waxaa jira dad badan oo raadinaya shucuur cusub oo kolba sida ay u adag tahay caqabadda, ayaa ka soo jiidasho badan. Jiilkan adrenaline laguma gaadho ku dhaqanka isboortiga kale ee caanka ah. Si kastaba ha noqotee, sida ay ugu egtahay hal-abuurka, waxay sidoo kale u dhigantaa halista caafimaadka ama sharafta jirka. Mararka qaar waxay noqon kartaa mid nafta halis galisa. Waxaa ka mid ah shuruudaha qeexaya inay tahay jimicsi xad dhaaf ah waxaan leenahay waxyaabo soo noqnoqda Midkood waa xawaare kan kalena waa joog sare. Taas macnaheedu maaha inay yihiin astaamaha kaliya ee qeexaya.
Liiska isboortiga xad-dhaafka ahi waa mid aan dhammaad lahayn. Qaar ka mid ah waxyaabaha soo jireenka ah ee sida caadiga ah lagu garto ayaa badanaa kuwa u muuqda waalli dhab ah halkii ay ka ahaan lahaayeen isboorti. Runtu waxay tahay in cayaarahaan lagu dhaqmi karo dhulka, barafka ama barafka iyo raacida baaskiilada buuraha, barafka. Sidoo kale waad mari kartaa Meelo aan la faafin oo ah buuro dhaadheer, canoning ama canyoning, fuulid bilaash ah, buur fuulid, parkour, IWM
Tusaalooyinka qaarkood sidoo kale waxay noqon karaan boodbood aan caadi ahayn, feerka xad dhaafka ah, duufaanta mowjadaha xad dhaafka ah, duulimaad bilaash ah oo baalal leh, cirka oo laga duulayo dhisme ama diyaarad, boodboodka bungee iyo kuwa kaloo badan. Sidii aan horeyba u soo sheegnay, dhammaan cayaarahaan halista ah, sababta ay ugu dhaqmayaan badanaa waa raadinta shucuurta, qodobkaan ayaa ah mid soo jiidasho leh. Noocyada noocan ah ee isboortiga ah, u diyaargarowga jireed waxaa laga yaabaa inuusan aheyn muhiimad muhiim ah. Si kastaba ha noqotee, maahan waxa kaliya ee soo jiidata.
Soojiidashada cayaaraha xad dhaafka ah
Shaki la'aan ka dambeeya cayaarahaan waxaa jira hiddo-wadayaal naga dhigaya inaan raadino xadkayaga ama baahi cakiran oo aan u kala saarno nafteena. Waxaa jira dad badan oo raba inay naftooda ka adkaadaan ama ay ka gudbaan cabsida qaarkood. Ciyaarahaani waxay u adeegaan si loo gaaro ujeedooyinkan sanad walbana noocyo cusub oo isboorti ah ayaa soo baxa.
In kasta oo ay dad badani u muuqdaan kuwo soo jiidasho leh, haddana waa inaan ogaanno haddii qof kastaa samayn karo. Sida iska cad, jawaabtani waa fududahay in laga jawaabo: maya. Dadka oo dhan waxay ku sameyn karaan cayaaraha halista ah tan iyo markii loo baahan yahay u diyaargarowga jireed iyo maskaxeed, oo ay la socoto sanado tababar ah edbinta iyo heerka dhibaatada ee horumarka.
Shuruudahaan ayaa aad uga fog baaritaanka caadiga ah ee caafimaadka si loo ogaado xaaladdeena caafimaad. Si kastaba ha noqotee, baaritaankan ayaa lagama maarmaan ah haddii aan dooneyno inaanu miisaan badnaano ama aan wadno xanuunno ku dhacno, sababtoo ah adrenaline-ka daran iyo shucuurta shucuurta ay qabaan awgeed Dad badan ayaa leh dhibaatooyin jireed oo caan ah sida laf-dhabarka, addimada, ama dhiig-karka. Kuwa leh halista wadnaha iyo xididdada waa inaysan ku tababbaran cayaaraha halista ah.
Hawlaha kale ee halista ah, uma baahnid inaad si aad ah ugu diyaar garowdo, kaliya ku bood sameynta sameynta. Xaaladdan oo kale, waxaan leenahay boodbood iyo raaf, iyo kuwo kale. In kasta oo qaar badan oo ka mid ahi u baahan yihiin awood sare, adkaysi iyo dabacsanaan, haddana kuma filna in laga takhaluso halista ay taasi leedahay. Waana sanadihii la soo dhaafay noocyada isboortiga noocan oo kale ah inay gaareen qabuuraha nolosha dad badan oo khasaaray.
Fasiraadda cayaaraha halista ah waxaa lagu sameyn karaa si xor ah, sida ay jiraan noocyo kale oo isboorti ah.
Maxaad u jeceshahay ciyaarahan
Marka laga soo tago adrenaline ama dareenka ladnaanta, waxaa jira cilmi ka dambeeya oo raadinaya sababta ay cayaarahaan aadka u daran u soo jiitaan. Waan ognahay taas hiddo-wadaha 'OPRL1' ayaa mas'uul ka ah xakamaynta cabsida iyo walbahaarka ka dib. Sidaa darteed, waxaan si cilmiyaysan u sharxi karnaa sababta shakhsiyaadka qaarkood ay u leeyihiin saadaalin ka weyn sidii ay u heli lahaayeen xadka ama ay ugu muuqdaan inaysan la dhicin dhacdooyinka naxdinta leh. Tusaale ahaan, waxaan helnay xirfadlayaal sida Fernando Alonso si ay mar kale u tartamaan toddobaadyo kadib markay ku dhowaadeen inay ku dhintaan tartan.
Dadka kale waxay u badan tahay inuu ku dhaco cudurka dhimirka xaalad kasta oo naxdin leh.
Waxaan ku siineynaa xoogaa talooyin ah oo ku saabsan cayaaraha halista ah oo lagula talin karo dadkaas doonaya in la arko si ay u sameeyaan markii ugu horeysay. Waan ognahay in cayaaraha xad-dhaafka ah ay ku lug leeyihiin dareen ama soojiidasho ay adag tahay in aan kaligeen xakameyno. Haddii aan go'aansano inaan sameyno qaar ka mid ah cayaarahaan, waxaa ugu wanaagsan inaan bilowno ku tababbarka xirfadlayaal khibrad leh. Xirfadlayaashani waxay naga caawin karaan inay nagala taliyaan dhaqamada iyo farsamada la raacayo inta lagu jiro jimicsiga. Maxaa intaa ka badan, Waxay awood u yeelan doonaan inay go'aamiyaan haddii aan ficillo nahay iyo in kale dhaqanka isboortiga. Kaliya kuma ansaxayso doonista, laakiin waa in sidoo kale lagu hagaajiyaa xaaladeena jireed iyo rajooyinkeena.
Farqiga udhaxeeya ku raaxeysiga cayaarahaan iyo soo afjarida nolosheena si deg deg ah waxaa lagu calaamadeyn karaa sanado badan oo diyaarin jir iyo farsamo ah Qaar ka mid ah cayaaraha ugu badan ee lagula taliyo ayaa ah tartamada masaafada dheer, ultratrails, km taagan, triathlon, isgoysyada, ironman, ultraman, iwm Waan ognahay inay metelaan tallaabo kale oo ah raadinta joogtada ah ee shucuurta iyo baahida loo qabo inaad ka soocdo dadka kale.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad ku baran karto waxyaabo badan oo ku saabsan cayaaraha halista ah iyo astaamahooda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » isboorti xad dhaaf ah
Hilqado dhaadheer oo loogu talagalay ragga